अब मुठभेडको राजनीति सुरु - नेपालबहस
अब मुठभेडको राजनीति सुरु
| १४:५३:२३ मा प्रकाशित
२९ माघ, काठमाडौं । अन्ततः केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्ना आलोचकहरुलाई थुनामै पठाउने विचित्रको अभ्यास थालेरै छाड्यो । बहुचर्चित एवं प्रचारित गरिएकी नेकपा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई ओली सरकारले पक्राउ पुर्जी नै जारी गरेर घरबाटै पक्रेको छ ।
आज बिहान घम्साघम्सी गर्दै प्रहरीले राजधानीस्थित झाँक्रीको शंखमुल निवासमै पुगेर प्रहरी हिरासतमा पठाएको छ । यो प्रकरणले अब नेपालमा मूठभेडको राजनीतिले स्थान पाउने संभावनालाई बल पु¥याएको छ ।
नेतृ झाँक्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति द्वैष फैलाएको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । झाँक्रीलाई बुझाइएको पक्राउ पुर्जीमा उनीमाथि राज्यविरुद्धको कसुर अन्तर्गत दफा ५८ भन्ने वाक्यांशसहित थुनामा पठाइएको छ ।
नेतृ झाँक्रीले गोरखामा आयोजित एउटा कार्यक्रममा बोलेको विषयलाई आधार बनाएर पक्राउ गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा नेतृ झाँक्रीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई लक्षित गरी भनेकी थिइन्–राष्ट्रपतिको त कुरा के गर्नु र ? बडामहारानीले चुनाव हुन्छ भन्नु भएछ । म बडामहारानीलाई गोरखाबाटै सन्देश दिन चाहन्छुु –शीतलनिवासको कारगेड छाडेर कोटेश्वरतिर फर्के हुन्छ, चाबेल की बानेश्वर कतातिर घर छ रे, नत्र बालकोटतिरै गएर चुनाव लडेपनि हुन्छ ।
झाँक्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि राष्ट्रपति भण्डारीकी छोरीले सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो गरेकी थिइन् । यस्तै झाँक्रीले राष्ट्रपतिको गरिमा र मर्यादामा चोट पुु¥याएको भन्दै अनेमसंघले समेत केही दिन अघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल समक्ष पक्रन दवाव दिएको थियो ।
हिजैपनि नेतृ झाँक्रीले राष्ट्रपति व्यक्ति नभई संस्था भएकाले आलोचना गर्न पाइने भन्दै सार्वजनिक मञ्चबाटै विरोध गरेकी थिइन् । लगत्तै आज ओली सरकारले झाँक्रीलाई पक्रन प्रहरी खटाएको थियो ।
अब झाँक्री मात्र होइन, ओली सरकारले आफूलाई गाली गर्ने जो कोहीलाई पक्रने सन्देश दिन समेत यो काम गरेको बुझ्न सकिन्छ । जसका लागि सरकारले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशिका जारी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । यसले राजनीतिलाई मुठभेडतिरै अग्रसर गराउने विज्ञहरुको बुझाई छ ।
नेपाल अब शान्तिको बाटोमाः ओली १८ मिनेट पहिले
नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहको संसदीय दलको बैठक जारी ४२ मिनेट पहिले
सेवाग्राहीसँग ५० हजार घुस लिएको आरोपमा सवइन्जिनियर पक्राउ ३१ मिनेट पहिले
दोभान आगलागीपीडितलाई भट्टराईको पाँच लाख सहयोग ३७ मिनेट पहिले
कञ्चनपुरमा प्रहरी र तस्करबीच भिडन्त, गोली लागेर भारतीय तस्करकाे मृत्यु १९ घण्टा पहिले
खोप लगाउन सहज पार्ने उद्देश्यले भवन निर्माण २ घण्टा पहिले
ओली र विप्लव राष्ट्रियसभागृह पुगे, संचारकर्मीको बाक्लो उपस्थिती १ घण्टा पहिले
राज्यले सहजीकरण गरेमा निजी क्षेत्रमार्फत द्रूत आर्थिक विकास सम्भव छ: वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल ५ दिन पहिले
ओली हटाउने सजिलो याे बाटो, किन छानेनन् प्रचण्ड–माधवले ? ५ दिन पहिले
‘रेमिट्यान्स दुरुपयोग’ले बढाउँदै सम्बन्धविच्छेद १ दिन पहिले
बहुमत पाएको दलबाट नै संविधानको अवमुल्यन : राप्रपा ४ हप्ता पहिले
वार्ताका माध्यमबाट समाधान खोज्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह ४ हप्ता पहिले
तीन आकाशे पुल सम्झौताको दुई वर्षपछि निर्माण शुरु हुँदै ३ हप्ता पहिले
आज पनि देशभर पानी र हिउँ पर्ने सम्भावना १ वर्ष पहिले
कोरोनाले विराटनगरमा ३ संक्रमितको मृत्यु ३ महिना पहिले
बिरामी बोक्न नमान्ने एम्बुलेन्सचालक विरुद्ध मुद्दा दायर ११ महिना पहिले
मन्दिरमा सुनको छाना लेपन गर्ने काम तीन वर्षदेखि अलपत्र ४ महिना पहिले